1.လေ ၀ င်လေထွက်ပေါက်များကိုလက်ခံပါ, ကြီးမားသောဝင်ပေါက်လေထုareaရိယာ, ထူးခြားသောအအေးခံ.
2.ပစ္စည်းမှထွက်သောပစ္စည်းသည်ဆလိုက်အဆို့ရှင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေး, အနည်းငယ်ကျန်နေတဲ့.
3.အအေးခံအစာတောင့်တင်းအပူချိန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက်မပိုပါ + 3~5℃, အမှုန်ပစ္စည်းအအေးကိုလည်းသင့်လျော်သည်.
4.စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည်အတိုင်း, ကထုတ်လုပ်နောက်ဆုံးတောင့် ပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးကြိတ် မြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်ပျော့နှင့်စိုထိုင်းသောဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းထားလို့မရပါဘူးနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအအေးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်အတောင့်တင်းအအေးနှင့်အေးစက်စေရန်နှင့်အအေးပေးသည့်အတွက်ထုတ်လုပ်သောအပူကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်
feed pellet cooler သည်အစာတောင့်တောင့်စက်၏အတောင့်တင်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်, အရာပစ္စည်းများနောက်ထပ်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အစာကျွေးတောင့်တင်းအရည်အသွေးနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်. မြင့်မားသောအလိုအလျောက်ဒီဂရီနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ, တန်ပြန်အတောင့်အအေးပေးစက်သည်အထူးရေနေသတ္တဝါများအတွက်အစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆင့်မြင့်အစာကျွေးခြင်းအတွက်စက်မှုထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။2လုပ်ဆောင်ချက်များကို:တောင့်တင်းသည့်အပူချိန်ကိုအအေးခံ။ အအေးခံစိုစွတ်မှုကိုလျှော့ချပါ။ တောင့်စက်မှထွက်လာသောအတောင့်သည်အပူချိန် ၇၀ ℃ ～ ℃ 90 at ဖြစ်သည်။,နှင့်လုံးလေးများအအေးစက်မှတဆင့်,အပူချိန်အခန်းအပူချိန်မှတပါး3℃～5less ထက်လျော့နည်းဖြစ်လိမ့်မည်,အစာတောင့်အအေးခံစက်သည်တောင့်အစိုဓာတ်ကို ၁၂.၅% အောက်လျော့နည်းစေသည်။.
Counterflow Feed Pellet Cooler ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
1.တောင့်တင်းသည့်အအေးသည်အပူချိန်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်အတူအအေးပေးသည့်အအေးကိုတန်ပြန်သောလက်ရှိအအေးခံမူ၏အားသာချက်ကိုရယူသည်. အေးသောလေသည်ပူပြင်းသည့်ပစ္စည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည့်အခါထိတ်လန့်စေသောအအေးဖြစ်စဉ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်ရူးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်တောင့်အသွင်အပြင်တားဆီးနိုင်ပါတယ်.
2.Cooling tank သည် Octagon ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်, အအေးမျှသေလွန်သောသူတို့သည်ထောင့်ရှိပါတယ်သေချာနိုင်ပါတယ်.
3.လေ ၀ င်လေထွက်ပေါက်များကိုလက်ခံပါ, ကြီးမားသောဝင်ပေါက်လေထုareaရိယာ, ထူးခြားသောအအေးခံ.
4.ပစ္စည်းမှထွက်သောပစ္စည်းသည်ဆလိုက်အဆို့ရှင်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေး, အနည်းငယ်ကျန်နေတဲ့.
5.အအေးခံအစာတောင့်တင်းအပူချိန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက်မပိုပါ + 3~5℃, အမှုန်ပစ္စည်းအအေးကိုလည်းသင့်လျော်သည်.
6.မြင့်မားသောအအေးနှုန်းနှင့်အအေးပေးအကျိုးသက်ရောက်မှု. counterflow pellets cooler သည်တောင့်တင်းသောအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တောင့်တင်းခြင်းကိုအအေးခံနိုင်သည်.
7.စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု.
1. အအေးသည်နောက်ဆုံးအစာတောင့်များ၏အရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သင့်သည်. အဆိုပါလုံးလေးများလျင်မြန်စွာအအေးခံရလျှင်, အပြင်ဘက်အလွှာများတွင်အက်ကြောင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်, အလှည့်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားပွန်းပဲ့ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်. ထို့အပြင်, အအေးမိကာလနှင့်အတူ, လုံးလေးများ၏အတွင်းပိုင်းအပိုင်းမှာနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီးလုံးလေးများသည်စိုထိုင်း။ စေးကပ်နေဆဲဖြစ်သည်. ပြီးတော့အရမ်းနှေးကွေးစွာအအေးပေးတာကြောင့်လုံးလေးများအရမ်းခြောက်သွားသည်, အရာကိုလည်းအက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်.
2. သတိပြုသင့်သည်မှာသေးငယ်သောလုံးလေးများသည်ကြီးမားသောလုံးလေးများထက်အပူနှင့်အစိုဓာတ်ကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာထုတ်လွှတ်သည်. အအေးပေးသည့်အတောင့်များကိုတောင်မှဖြန့်ဝေခြင်းသည်အအေးပေးသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုပိုကောင်းစေသည်.
3. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, တန်ပြန်စီးဆင်းမှုအေးအတွက်လေထုမြန်နှုန်းအကြားနေသင့်ပါတယ် 0.8 နှင့် 1.5 ဒေါ်
Countercurrent လုံးတောင့် Cooler စက်နည်းပညာ Parameters
မော်ဒယ် VTLN1.5 VTLN2.5 VTLN4 VTLN6 VTLN8
Volume ကိုအအေးခံ 1.5 m3 2.5 m34m36m3 8 m3
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား3t / h5t / h 10 t / h 15 t / h 20 t / h
သက်ဆိုင်သောပါဝါ 0.75 Kw 1.1 Kw 1.5 Kw 1.5 Kw 1.5 Kw
Airlock ပါဝါ 0.37 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw